गर्मीले हैरान हुनुहुन्छ ? पानीसँगै मिलाएर पिउनुहोस् यी ५ चिज
अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति २१ असार २०७६, शनिबार ११:०८
गर्मीको समय, खानपानमा विशेष ध्यान दिन सकिएन भने विभिन्न प्रकाकार स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो स्वास्थ्य समस्या बाह्य (देखिने) र आन्तरिक (नदेखिने) पनि हुन्छ ।
गर्मी समयमा खानपानमा ध्यान नदिँदा विभिन्न प्रकारका सरुवा रोगको संक्रमण छिट्टै सर्ने खतरा हुन्छ । यसका साथै तपाईंले आफ्ना बाह्य तोचाको सुरक्षाका लागि पनि खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।गर्मीको बेला धेरै पानी पिउनु जति आम कुरा हुन्छ, त्यति नै पानीसँगै केही खानेकुरा मिलाएर पिउँदा अझ लाभदायक हुन्छ ।आज हामी गर्मीको समयमा पानीसँगै मिलाएर खानेकुरा र त्यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा पार्ने सकरात्मक प्रभावका बारेमा केही जानकारी यहाँ उल्लेख गर्दैछौं,
तपाईं आफूले पिउने पानीलाई पहिले उमाल्नुहोस्, त्यसमा पानीको मात्रा अनुसार दालचिनीको धूलो पनि मिलाउनुहोस् (जस्तै १ गिलास पानीमा १ चम्चा दालचिनीको धूलो) । त्यसपछि पानीलाई छानेर चिसो भएपछि पिउन सक्नुहुन्छ । यस्तो पानीलाई तपाईंले दिनभरी पिउने गर्नुभयो भने तपाईंको पाचन पक्रियामा सुधार आउने छ । साथै मुखमा आउने दूर्गन्धबाट पनि छुटकरा पाउन सकिन्छ । यसका साथै दालचिनीको पानीले तपाईंको रक्तसञ्चार प्रक्रियालाई राम्रो बनाउने छ ।
यदि तपाईंले गर्मीका समयमा पानीमा स्ट्रबरीको रस मिलाएर पिउनुभयो भने यसले तपाईंको त्वचामा निखार ल्इाउने छ । साथै गर्मीका समयमा घामको किरणबाट छालामा बस्ने जाने दाग–धब्बाबाट पनि छुट्करा पाइने छ ।
पुदिना आफैंमा एक औषधि मानिन्छ । तपाईंले पानीमा पुदिना मिलाएर पिउनुभयो भने यसले तपाईंलाई गर्मीको समयमा सितलता प्रदान गर्नुका साथै रक्तसञ्चार प्रक्रियामा समेत मद्दत पु¥याउने छ ।
गर्मीका बेला कागती पानी पिउनु सबैका लागि आम कुरा नै हो । यसले शरीरमा स्फूर्ति प्रदान गर्छ । साथै कागतीमा हुने औषधीय गूणले पनि गर्मीको समयमा राहत प्रदान गर्ने छ ।
महमा ब्याक्टेरियासँग लड्ने गुण हुन्छ । साथै यसले तपाईंको अनुहार तथा छालामा रहेका दाग–धब्बा हटाउन पनि मद्दत गर्छ । दैनिक विहान तातोपानीसँग मह मिलाएर पिउँदा तपाईंको पेटको बोसो मात्रै घट्दैन कि यसले तपाईंलाई स्फूर्ति पनि प्रदान गर्छ ।
यदि राति निदाउन नसकेमा अपनाउनुस् यी उपाय
काँक्रोका रोचक १५ तथ्य र स्वास्थ्यमा फाइदा
शरीरमा आउने अनावश्यक रौंलाई कसरी हटाउने ? यस्तो छ सजिलो तरिका
कालो चिया पिउनुका फाइदै फाइदा